Liverpool oo ka walwalsan musiibadii kaga habsatay xulka qaranka Germany koobka aduunka 2018 – Gool FM
Liverpool oo ka walwalsan musiibadii kaga habsatay xulka qaranka Germany koobka aduunka 2018
Dajiye June 28, 2018
(Russia) 28 Juunyo 2018. Ma jirin cid fileesay in xulka qaranka Germany uu xili hore ku hari doono koobka aduunka 2018 haatan ka socda dalka Russia.
Laakiin kubada cagta ma taqaao wax la yiraahdo suuragal ma noqoneyso, waxaan haatan dhacay wax aan cidna fieynin inay dhici karaan, kadib markii koobka aduunka 2018 laga cirib tiray xulka kusoo guuleestay sanadii 2014 ee Germany.
In Germany uu ka haro koobka aduunka 2018 ayaa wuxuu ahaa warkii ugu xumaa u ahaa shacabka reer Germany, jamaahiirta xulka iyo kuwa caalamka.
Laakiin marka dhinaca laga fiiro wuxuu ahaa war u wanaagsan jamaahiirta reer Brazil iyo kuwa eer Talyaani, maadaama ay ku dagaalamaan tartamada caalamiga ah
Laakiin wargeysyada gudaha dalka England ayaa waxay hadalka u dhigeen dhinaca kale, kadib marka uu xulka Germany isaga haray koobka aduunka 2018.
Waxaa la filayaa in macalinka reer Germany ee Joachim Low waqti kasta uu ka dhaqaaqi karo shaqada tababarka, balse su’aasha taagan ayaa ah kumuu noqon doonaa macalinka cusub? Waana waxa ka dhex guuxaya maskaxda jamaahiirta reer Germany.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in jamaahiirta ay rajeenayaan in xiriirka kubada cagta dalka Germany ay wada hadalo la galaan macalinka kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp.
Laakiib qaar badan oo ka mid ah jamaahiirta Reds ayaa fariimo ay ugu direen barta Twitter kuwa reer Germany waxay ugu sheegeen: “Ka fogaada macalinka kooxdeena”.
Haddii CAAWA barbaro ay ku kala baxaan England iyo Belgium sidee loo kala saarayaa?
RASMI: Kooxda Valencia oo ku dhawaaqday saxiixa difaaca reer France ee Mouctar Diakhaby